२०७७ माघ ५ सोमबार ०१:४०:००
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका मागसहित परेका १३ रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको छ । बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यही जवाफमाथि अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई संसद्ले के गर्न दिएन, के असहयोग ग¥यो ? प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउनुपर्छ भन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा हो यो,’ उनले इजलासमा भने, ‘असहयोग कतै छैन । संसद्ले रेललाई केरुङमै छेक्यो कि पानीजहाजलाई कोसीबाट फिर्ता गरिदियो ? यो कारणले विघटन गरेको हुँ भन्नुभए हुन्थ्यो ।’
निवेदकले ०७२ को संविधान जारी हुनुअगाडि संविधानसभामा भएको बहस मगाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार इजलास सुरु हुनेबित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा निवेदक दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘विघटनको सन्दर्भमा के बहस भएको थियो, विविध समितिहरूले संविधानका धाराका विषयमा अवधारणा बनाएका थिए । संवैधानिक व्याख्याका लागि ती रेकर्डहरू मगाइयोस् श्रीमान् ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आवश्यकताअनुसार झिकाइने बताए । सोमबार पुनः यो रिटमा बहस हुनेछ ।